I-Lovely Treehouse e-Woods eduze no-Stream - I-Airbnb
I-Lovely Treehouse e-Woods eduze no-Stream
476 okushiwo abanye
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Heather
Qaphela: Sicela ufunde imininingwane yemikhawulo yokuvakasha ye-covid ngezansi ngaphambi kokuthi ubhukhe.
Uzozwa izingcindezi zokuphila zikhukhuleka njengoba uzulazula ezihlahleni futhi ulalela imisindo yomfudlana omuhle izinyawo nje ukusuka endaweni ye-treehouse. Awusoze wafuna ukuhamba! Jabulela isikhashana sokuba wedwa noma isikhathi esithile esikhethekile uwedwa nomuntu omthandayo. Kunzima ukushaya i-Stone City Treehouse ukwenza isikhathi sakho ungabikho esikhethekile!
ULWAZI NGE-COVID - 10/17/21
Bengikade ngingabuyekezi imininingwane ye-Covid, ngakho-ke nansi imininingwane yakamuva:
I-Vermont okwamanje ayinayo imikhawulo yokuhamba noma imikhawulo yokuziphatha eduze ne-Covid. Anginazo izimfuneko ezinjalo ze-treehouse futhi. Kodwa-ke, ngiyagonywa futhi ngigqoka imaski endaweni yomphakathi yasendlini.
Sonke masihloniphe futhi sibe nomusa!
Ngemuva kosuku lwakho lokuqwala izintaba, ukushushuluza, noma ukuvakasha izindawo zotshwala zendawo kanye nezindawo zokuphuza utshwala, woza ekhaya kule ndlu encane enhle, yangasese esezihlahleni! Noma, vele uchithe usuku ngokuvilapha uzipholele emlilweni nokufunda, kuyilapho umsindo womfudlana uthobisa wena.
Hamba ehlathini, ukhuphuke izitebhisi, ungene kwesinye isici - ongeke ufune ukusishiya! Kuningi okwacatshangelwa ekuklanyweni kwayo futhi izinto zasendaweni, zemvelo, nezigaywe kabusha zazihamba phambili ekwakhiweni kwayo.
Gxila ekwakhiweni kwangaphakathi okukhethiwe ngenkathi uziphumulele endaweni yegumbi lokuhlala futhi ugqolozele amafasitela amakhulu, agaywe kabusha (kusuka endlini yesikole endala, yendawo).
Jabulela idekhi ebheke umfudlana wonyaka wonke (ongase ube yiqhwa ebusika) futhi uvumele umsindo wamanzi ugeze kuwe. Ungase ubone ngisho nabagxekayo uma usanele!
Kunendawo yokuhlala emnandi, i-hammock, nendawo yomlilo wekamu ngezansi nje kwe-treehouse khona emfudlaneni, enombono omangalisayo we-treehouse. Nombhede olengayo ngaphansi!
Ungakwazi ukupheka ukudla okulula ku-propane campstove (ngenketho ye-griddle) noma usebenzise i-grill encane yamalahle esikhaleni esingaphansi kwe-treehouse. Kukhona isiqandisi esincane esinesiqandisi esihlukile ukuze ugcine umkhiqizo wakho omusha ovela emakethe yabalimi kanye nobhiya wakho wasendaweni omnandi futhi opholile. Kunohlelo lwamanzi lwakudala kakhulu (futhi olulinganiselwe) ongalusebenzisela ukugeza izitsha.
Siphinde sinikeze ama-condiments ayisisekelo nezisekelo zokupheka, njengamafutha omnqumo nosawoti kanye nopelepele. Siphinde sinikeze ikhofi, ushokoledi oshisayo, ne-lemonade. Iningi lemikhiqizo esiyinikezayo ukuze uyisebenzise, futhi izinto zethu zokuhlanza nemikhiqizo yephepha ivela Ezimpahleni Zomphakathi futhi ungathola isaphulelo sika-25% ekuthengeni kwakho kokuqala ngekhodi yekhuphoni ethi TREEHOUSEPGA.
Kukhona indlu yangasese yokwenza umquba eyisisekelo endlini yezihlahla ukuze kube lula kuwe, kodwa futhi uyakwazi ukufinyelela endlini yokugezela egcwele, yesimanje endlini, eneshawa elihle.
Uma sekuyisikhathi sokulala, gibela ileli ephezulu uye "esidlekeni" bese ucwila embhedeni othokomele. Vula amafasitela ukuze uzwe imisindo yasebusuku yasehlathini!
Sibeka umhlaba wethu kuqala futhi sicabangela imvelo kuzo zonke izinqumo: sikhiqiza ugesi welanga; senza umquba futhi sigaywe kabusha; sisebenzisa imikhiqizo yokuhlanza imvelo; sigwema izinto ezilahlwayo ngangokunokwenzeka; futhi sasebenzisa izinto eziningi zasendaweni nezigaywe kabusha ekwakhiweni kwendlu yezihlahla.
Isakhiwo sangaphakathi singu-10'x16' nge-loft kanye nedekhi ingu-4'x16'.
umbhede oyidabulu engu- 1, imibhede yomoya engu- 1, imibhede yenetha engu-2
4.98 · 476 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-476
Idolobhana laseHardwick liqhele ngamamayela amathathu, futhi liyidolobhana elithandekayo, elincane elinakho konke ongakudinga.
I-treehouse itholakala ehlathini, ngomfudlana unyaka wonke. Kungamakhilomitha amathathu ukusuka eHardwick Village, etholakala kumahektha angama-20 ezinkuni, ikakhulukazi izihlahla ze-maple futhi inomfudlana omuhle unyaka wonke ogeleza eduze kwendlu.
Eduze kunokuningi ongakwenza!
Izindawo zokudlela zifaka:
- Indawo yokudlela yase-Village - ukudla okuhle, izinto eziningi zasendaweni, zama i-Jasper Hill Cheese Eggs Benedict!
- I-Positive Pie - i-pizza enhle nokukhethwa kukabhiya. Izingane zami ziyawathanda amafindo kagalikhi! Ithi sawubona ku-Butch, umthengisi wotshwala - ungumngane wakudala!
- I-Buffalo Mountain Co-op Cafe - izinketho eziningi ezinhle zesidlo sasekuseni nesasemini! Ukugxila ekudleni kwasendaweni, futhi isitolo esingaphansi sinakho konke okudingayo. Abantu abaningi abakhulu ongahlangana nabo lapha, futhi :)
- I-Scale House - indawo yokudlela entsha emangalisayo edolobheni, egxile ekudleni kwasolwandle okusha okuvela eMiseni, kodwa futhi nenqwaba yobuhle bendawo!
- I-House of Pizza - i-pizza enhle ngentengo enhle! Lapha yilapho ngihlala ngithola khona i-pizza yami yokukhipha, kodwa banayo okungaphezu nje kwe-pizza.
- Isitolo sekhofi esisha esihle esibizwa ngeFront Seat Coffee!
Kukhona nendawo yokudlela yasendaweni yamaShayina, i-Yummy Wok, ne-Connie's Kitchen, indawo yokubhaka yasendaweni.
Okunye okukhethwa kukho okuhlobene nokudla neziphuzo kugcwele endaweni!
- Caledonia Spirits / Barr Hill - Ngithanda ukuchema kancane kulaba basebenzi - ngibasebenzele itoho iminyaka. Kodwa, izandla-phansi, i-gin engcono kakhulu emhlabeni! Babekade bezinze e-Hardwick kodwa manje sebenendawo entsha, emangalisayo yokukhiqiza izitsha e-Montpelier. Uma uthanda i-gin, noma uma ungathandi i-gin, yihlole! Kukhona ne-vodka ethandekayo eyenziwe ngoju, kanye ne-gin eyingqayizivele, ebizwa ngokuthi i-Tom Cat. Bebesebenza kanzima ne-whisky engaziyo ukuthi izoba mnandi kakhulu!
- I-Hill Farmstead Brewery - ivotele ubhiya ohamba phambili emhlabeni iminyaka eminingi, lena iMecca yabathandi bakabhiya! Kusele imizuzu engu-20 kuphela, lufanele uhambo!
- I-Pete's Greens Farmstand - ivula ngezikhathi ezithile zonyaka, lesi isiza sepulazi lelinye, uma kungenjalo, ipulazi lemifino elikhulu kunawo wonke e-Vermont! Kutholwe e-Craftsbury, futhi kuwufanele ukuhamba ngemizuzu engama-20 noma ngaphezulu.
- I-Hardwick Farmers' Market - nayo eyigugu lesizini, itholakala e-Atkins Field e-100 Granite St. e-Hardwick izinto eziningi ezinhle zasendaweni, kusukela emifino kanye noshizi kuya ezitshalweni nemisebenzi yezandla, nakho konke okuphakathi! Isebenza ngoLwesihlanu kusukela ngo-3-6pm, ngoJuni kuya kuSepthemba.
- Jasper Hill Cheese - abanayo indawo yezivakashi futhi awukwazi ukuvakashela isayithi, kodwa ushayela eduze kwabo lapho uya e-Hill Farmstead futhi ungabona inqolobane enhle, ependiwe. Amashizi amangalisayo, ahlonishwa umhlaba wonke - ungathola e-Willey's Store e-Greensboro noma e-Buffalo Mountain Co-op e-Hardwick.
- Isitolo sikaWilley - Sitholakala eGreensboro, uzothola noma yini oyidingayo lapha! Banokudla kwasendaweni neziphuzo, igilosa ejwayelekile, ihadiwe, izinto zasendlini, izingubo zokugqoka nezicathulo. Lona umbono ngokwawo!
- Usiraphu we-maple
- I-Cabot Ushizi
- Vermont Food Venture Centre
Imisebenzi Yangaphandle (Bheka Incwadi Yomhlahlandlela ukuze uthole okwengeziwe)
- Ukuqwala izintaba - Nichols Ledge, Barr Hill, Hardwick Trails...
- Ukubhukuda kwasendaweni - I-Nichols Pond, i-Caspian Lake
- I-Canoeing and Kayaking - I-Nichols Pond, i-Caspian Lake, i-Hardwick Lake
- I-Downhill Skiing - I-Stowe, i-Smuggler's Notch, i-Jay Peak, i-Burke Mountain yizona eziseduze kakhulu, cishe ihora elilodwa ukusuka.
- I-Mountain Biking - I-Kingdom Trails eBurke idume umhlaba wonke. Ungakwazi futhi ukuqasha amabhayisikili, okuhlanganisa namabhayisikili amasondo anamafutha eqhwa, e-Craftsbury Outdoor Center.
- Highland Centre for the Arts
- Isinkwa kanye Nopopi
- Abadlali be-Craftsbury Chamber
Ngizama ukuhlangana nawe lapho ufika ukuze ngikuqondise esikhaleni. Kukho konke ukuhlala kwakho ungase unqamule indlela nami nomndeni wami kanye/noma izivakashi eziqashe indlu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hardwick namaphethelo